BURMA: Online News & Analysis: မြန်မာ နှင့် Political Schizophrenia တစေ့တစောင်း---True story about Burma and political schizophrenia.
မြန်မာ နှင့် Political Schizophrenia တစေ့တစောင်း---True story about Burma and political schizophrenia.
တကယ်တော့ အရူး အချင်းချင်းပဲ နားလည်တယ်။
အရူးထောင် တခု မှာ ပါ။ အားလုံး က စိတ္တဇ ရောဂါသည်တွေကြီးပဲ။ စိတ်ကစဉ့်ကလျားခံစားနေရတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေ ကုသနေကြတာ။
တနေ့တော့ မောင်ထော် ဆိုတဲ့ စိတ္တဇ ဝေဒနာရှင် အရူးတယောက် လူမသိတုန်း ထောင်ခန်းထဲ က လွတ်ထွက်သွားပြီး သစ်ပင်ပေါ် အမြင့်ဆုံးတက်ပြီး စဉ်းစားခန်းဖွင့် နေလေရဲ့။ စိတ္တဇ ဆရာဝန်ကြီးတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ ၊ အဏာပိုင်တွေ၊ အရူးထိမ်းတွေ လည်း အရူး သစ်ပင်ပေါ် က နေ ပြုတ်ကျပြီး၊ သေမှာ ကြောက်တော့ ခြောက်ခါတမျိုး၊ ချော့ခါတမျိုး အရူးကို ပြန်ဆင်းလာဖို့ အရူးထောင် ထဲ မှာ အုပ်အုပ်ရုန်းရုန်းဖြစ်နေကြတယ်။ သစ်ပင်ပေါ် က ပြုတ်ကျလာရင် အရေးပေါ် ကုသဖို့ ၊ အသက်ကယ်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ နဲ့ ပြာပြာသလဲ အလုပ်ရှုပ်နေကြလေရဲ့။
သူတို့ ပြာပြာသလဲ အရေးတယူလုပ်နေလေ၊ အရူး က စိတ်ရှုပ်ဟန်နဲ့ မြင့်သထက်မြင်အောင် တက်သွားပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေလေသပေါ့။ နေမြင့်လေ အရူးရင့် လေ ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဒီမှာ တင် ယဉ်ယဉ်လေးရူး နေတဲ့ ကိုအောင် ဆိုတဲ့ ကိုထော်ရဲ့ အခန်းဖော် အရူးတယောက် က ကြားနေ၊ မြင်နေရတော့ စိတ်မရှည်တော့တဲ့ လေသံနဲ့ “ခင်ဗျားတို့ တော်တော်ညံ့ကြတာပဲ” လို့ လူအုပ်ကြီး ကို လှမ်းအော်ပြောပြီး၊ ကျုပ် ဒီကောင့် ကို အခု ပဲ ပြန်ဆင်းအောင် လုပ်နိုင်တယ် လို့ မြည်တွန်တောက်တီး ပြောဆိုလိုက်တယ်။ လူတွေ လည်း အလုပ်ရှုပ်နေကြတော့ သူပြောလိုက် တာ ကို အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သက်တမ်းရှည် အရူးထိမ်းတွေ က တော့ သတိပြုမိလိုက်ကြတယ်။
စိတ္တဇ ဆရာဝန်တွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ ၊ အဏာပိုင်တွေ လည်း အချိန်က လည်းကြာ၊ ကြံရာ မရ နဲ့ လက်လျော့လိုက်ကြပြီ။ ဒီမှာ တင် ကိုထင်ကျော် ဆိုတဲ့ လုပ်သက်ကြာရှည်တဲ့ အရူးထိမ်း တယောက် က အကြံပေးတယ်။ အရူး အချင်းချင်း ထိမ်းကြည့်ရအောင်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ လှမ်းအော်ပြောလိုက်တဲ့ ကိုအောင် ဆိုတဲ့ ကိုထော်ရဲ့ အခန်းဖော် အရူးတယောက် ကို ခေါ်ထုတ်ပြီး၊ မင်း ဒီကောင့် ကို သစ်ပင်ပေါ် က ပြန်ဆင်းအောင် လုပ်ပေးရင် ၊ လူ့ အသက် ကို ကယ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် မင်း ကို ငါတို့ အရူးလို့ မသတ်မှတ်ဘူးပေါ့လို့ ဆိုပြီး ချော့ပြီး ခေါ်ထုတ်လာတယ်။ ဒီမှာ တင် ကိုအောင် က “ကျုပ်မရူးဘူး။ ခင်ဗျားတို့ သာ ရူးနေကြတာ။ ကျုပ် ဒီအရူး ကို အောက်ပြန်ဆင်းအောင် အခုလုပ်ပြမယ်” လို့ ဆိုတယ်။
လူအုပ်ကြီး က လည်း ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေရှာတဲ့ ကိုအောင်ဆိုတဲ့ အရူး ကို စိတ်ဝင်တစား ၀ိုင်းအုံ ကြည့်နေကြတယ်။ သစ်ပင်ကြီးအောက်ရောက်တော့ အရူးထိမ်းတွေဆီ က ကြိမ်လုံးတောင်းပြီး-
“ ဟဲ့…မောင်ထော်..မင်းကိုမင်း အောင်ဆန်း ကို အားကျပြီး စိတ်ကြီးဝင် ဘ၀င်မြင့်မနေနဲ့။ မင်း အခု ဆင်းမလား မဆင်ဘူးလား။ ကြိမ်လုံးလေးဝှေ့ရင်း ငါလုပ်လိုက်ရင် သေသွားတော့မယ် လို့ မောင်ထော်ကြားအောင် အကျယ်ကြီး လှမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်။” ဒီမှာ တင် အရူးမောင်ထော် က “အကိုကြီးရယ် မလုပ်ပါနဲ့ လို့ပြောပြီး ချုံးပွဲချ ငိုတော့တာပဲ။”
“အေး..မသေချင်ရင် မင်းချက်ချင်းဆင်ခဲ့ ဆိုပြီး၊ သစ်ပင်ကြီး ကို တွန်းလှုပ်ပြပြီး ခြိမ်းချောက်လိုက်တော့” အကိုကြီး ရယ် မသတ်ပါနဲ့၊ အခုပဲ ဆင်းဆို ဆင်းပါမယ်လို့ ငိုပြီး ဆင်းလာတော့ တယ်။ သစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ မှ “ကိုကြီး ကယ်တဲ့ အသက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ အခန်းဖော် ကိုအောင် ကို ရှိခိုးဦးချတယ်။” ကိုအောင် က လည်း “ မင်းနောက်တခါမလုပ်နဲ့” ဆိုပြီးဆုံးမ စကားပြောဆိုပြီး၊ ပုခုံးဖက် ပြီး နှစ်ယောက်သား အခန်းထဲပြန်ဝင်သွားကြတယ်။
အခန်းထဲ ပြန်မ၀င်ခင် ကိုအောင် က လူအုပ်ကြီးကို အော်ပြီး ပြောသွားသေးတယ်။ “တွေ့လား…ကျုပ်မရူးပါဘူးပြောနေတာ ၊ ခင်ဗျားတို့ က မယုံဘူး။ ကျုပ် ညီလေး မောင်ထော် တယောက် ပဲ သိတယ်” ဆိုပဲ။
ဒီ မှာတင် စိတ္တဇ ဆရာဝန်တွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ ၊ အဏာပိုင်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်တစား ၀ိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ သူတွေ လည်း အံ့အားသင့်သွားတယ်။
ဒီမှာတင် အရူးထိမ်း ကိုထင်ကျော် က မှတ်ချက်ပြုတယ်။ တခါတခါ အရူးတွေကို လူကောင်းတွေ က ပြောလို့ မရဘူး။ အရူးတွေပြောတာတွေ၊ အရူး အချင်းအချင်း ပဲနားလည်ကြတယ်။ သူတို့ အချင်းချင်း က ဘာသာတူတယ် လို့ မှတ်ချက်ပြုလိုက်တော့မှ စိတ္တဇ ဆရာဝန်တွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ ၊ အဏာပိုင်တွေလည်း အခု မှပဲ ပြိုင်တူပြုံးလိုက်မိကြတာတွေ့ရတော့တယ်။
၁၉၈၀ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ အရူးထောင် မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တခု ပါ။
Political Schizophrenia နိုင်ငံရေး သွက်ချာပါဒ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ရောဂါ ခံစားနေကြရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာလည်း အရူးတွေပြောနေတဲ့ စကား၊ အရူးအချင်းချင်းပဲ နားလည်နိုင်ပေလိမ့်မည်၊ လူကောင်းတွေ ရဲ့ စကားက တော့ တိုးပေါက်လိမ့်မယ် မထင်။
သူများရူးတိုင်း ကိုယ်လိုက်ရူးဘို့ မလိုပါ ။
အရူးကို အမဲသား မကြွေးပါနဲ့။ နွားမြင်တိုင်းလက်ညှိုးထိုးနေပါလိမ်.မယ် တဲ့။
ယဉ်ယဉ်လေးနဲ.ရူးနေသူကို သိပါ ၊ သွက်ချာပါဒ ထက်ပိုပြီးသတိထားသင့်ပါတယ် ။
ချင့်ချိန်ယုံကြပါ၊ ပုဂိုလ်စွဲ မရှိသင့် ။ တရားဆိုတာကိုယ်မှာသာရှိပါတယ် စသဖြင့် စသဖြင့်တွေ ပေါ့။
မြန်မာပြည်သူတွေ အားလုံး Political Schizophrenia နိုင်ငံရေး သွက်ချာပါဒ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ရောဂါ ခံစားနေကြရတဲ့ အရူးထောင်အကျဉ်းကျခံဘ၀ မှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by Burma Golf Club at 8:42 PM
မြန်မာ နှင့် Political Schizophrenia တစေ့တစောင်း--...